Indlu enamashubhu aluhlaza, eduze kwaseVeluwe. - I-Airbnb
Indlu enamashubhu aluhlaza, eduze kwaseVeluwe.
Stroe, Gelderland, i-Netherlands
Indlu encane ibungazwe ngu-Elly
U-Elly Ungumbungazi ovelele
IBIJTIEN yindlu encane ezimele enamashutha aluhlaza, onqenqemeni lweVeluwe. Le ndlu encane inegumbi lokuphumula elinekhishi kanye neshawa kanokusho enendlu yangasese phansi. Igumbi lokulala liyindawo ethokomele esitezi sokuqala.
Ithala elineshawa yangaphandle kanye nebhavu elishisayo lingasetshenziswa ngenkokhelo. Sonke isivakashi esisha sithola amanzi ahlanzekile kubhavu oshisayo! IVeluwe ewudedangendlale enamakhilomitha amabhayisikili nezindlela zokuhamba ngezinyawo iqhele ngekhilomitha elingu-1.
Ikotishi lifakwe ikhishi elinesiqandisi. Alikho ikhishi elibanzi, kodwa ihhavini lokubhaka isemishi noma i-pizza kanye ne-hotplate kagesi ukuze uthose iqanda noma ushise ipani lesobho. Kukhona ikhofi netiye mahhala. Kunezikhungo ezahlukene zokudla kule ndawo. Ukubuka okuhle okungavimbekile kanye nebanga elifushane ukusuka emahlathini abanzi kanye ne-heatland. Ikotishi liseduze nomzila wesitimela nothelawayeka, kodwa lokhu akulona inkathazo. Indawo enhle yokujabulela ingilazi yewayini ngaphakathi noma ngaphandle uma isimo sezulu sisihle. Kunenqwaba yezincwadi nemidlalo ngaphakathi, kodwa i-WIFI nayo iyashesha, ngakho-ke umdlalo we-Wordfeud ungadlalwa kuselula yakho. Lapho kubanda ungajabulela ubhavu oshisayo (ngenkokhelo). Letha ezakho izingubo zokubhukuda kanye neziliphu, ingubo yokugezela kanye nokhuni kuzokulungela. Kukhona neshawa yangaphandle. Woza futhi ujabulele!
Thatha uhambo oluhle lwebhayisikili phezu kwe-heath, lokhu kungaphakathi kwamakhilomitha angu-2 ukusuka endlini yethu. Kuyathandeka ukuhamba ngebhayisikili ukuya e-Kootwijk noma e-Gardenen. Kukhona ukudla okuningi okunethezekile lapha. Kodwa futhi ungaba nokudla ukuze udle e-Stroe ngokwayo. I-Park De Hoge Veluwe iqhele ngamakhilomitha ayi-15. Lapha ungasebenzisa amabhayisikili amhlophe futhi uhlole ipaki.
Ngingathanda ukukwamukela futhi ngikuchazele ukuthi ushisisa kanjani ubhavu oshisayo. Sizophinde sihlangane uma sesihamba. Uma unanoma yimiphi imibuzo okwamanje, zizwe ukhululekile ukungidlula noma ungithumelele uhlelo lokusebenza.
UElly Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Stroe namaphethelo